हेटौंडा–१५ मा दशैं कप फुटबल प्रतियोगिता गेम शुरु - नेपालीको समाचार
१४ आश्विन २०७८, बिहीबार १३:०९ प्रकाशित
मकवानपुर – मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ मा टोल स्तरिय फुटबल प्रतियोगिता(दशैं कप) बुधबार देखि शुरु भएको छ । सामाजिक सद्भाव अनि उत्कृष्ट फुटबल खेलाडीहरु उत्पादन गर्ने उदेश्यले १५ न. वडामा टोल स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता रातोमाटेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयको खेलमैदानमा शुरु भएको छ।
बागमती प्रदेश शसस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय रातेमाटेको खेल मैदानमा भएको उद्घाटनको पहिलो खेलमा रातेमाटे टोल विकास समिति विजयी भएको छ । रातेमाटेले बुद्धदर्शन टोल विकास टिमलाई लाई ६–० गोलको अन्तरले हराएको हो । खेलमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै दूई गोल गरेका रातमाटे टोल बिकासका लाक्पा लामा म्यानअफ द म्याच घोषित भए ।
त्यस्तै दोस्रो खेलमा श्रृजनशिल टोल विकास समिति विजयी भएको छ । श्रृजनशिलले गौरिशंकर टोल विकासलाई ४ का विरुद्ध १ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । खेलमा उत्कृष्ट प्रर्दशनका युतेस स्याङ्बो म्यानअफ द म्याच घोषित भए ।
नेपालीहरुको महान पर्व विजया दशमीको अवसरमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितको उद्घाटन हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं.१५ का वडाध्यक्ष महारत्न लामाले गरेका थिए । उद्घाटन कार्याक्रममा बागमती प्रदेश शसस्त्र प्रहरी गण मुख्यालयका प्रमुख एवम प्रहरी उपरीक्षक केदार खनाल, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष सानु लामा, नेकपा एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य सुनिल मोक्तान, नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कमिटी सदस्य ललित घलान, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।प्रतियोगिताको विजेताले ट्रफि सहित ५० हजार र उपविजेताले २५ हजार प्राप्त गर्ने छन् ।
१४ आश्विन २०७८, बिहीबार १३:०९ मा प्रकाशित